ဗိုလ်ချုပ်မှူးမင်းအောင်လှိုင် ရုရှား စစ်ဘက်နည်းပညာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့နဲ့ တွေ့ဆုံ | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း ပြည်တွင်းသတင်း ဗိုလ်ချုပ်မှူးမင်းအောင်လှိုင် ရုရှား စစ်ဘက်နည်းပညာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့နဲ့ တွေ့ဆုံ
ဗိုလ်ချုပ်မှူးမင်းအောင်လှိုင် ရုရှား စစ်ဘက်နည်းပညာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့နဲ့ တွေ့ဆုံ
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ၊ စစ်ဘက်နည်းပညာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့(FSMTC)ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူး Mr. Alexander. FOMIN ဦးဆောင်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ကိုဒီကနေ့နံနက် ၁၀ နာရီခွဲက နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာ ဧည့်ခန်းမဆောင်မှာ တွဆုံခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီလို့တွေ့ဆုံရာမှာ မြန်မာ-ရုရှားနှစ်နိုင်ငံ တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား လက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့ စစ်ဘက်နည်းပညာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေ၊ လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းဆိုင်ရာ ကိ စ္စရ ပ်တွေ နဲ့ ဆက်လက်တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်သွားမယ့် အခြေအနေတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။
တွေ့ဆုံ ပွဲမှာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နဲ့အတူ ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး (ကြည်း၊ရေ၊လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြထွန်းဦး၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်အောင်စန်း၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(လေ)ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်အောင်မြင့် နှင့် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးတွေ တက်ရောက်ကြပြီး ညွှန်ကြားရေးမှူး Mr. Alexander. FOMIN နှင့်အတူ Rosoborone Export ကုမ္ပဏီရဲ့ ညွှန်ကြားရေး မှူးချုပ်ဖြစ်သူ Mr. Anatoly ISAYKIN ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E.Mr. Nikolay LISTOPADOV နဲ့တာဝန်ရှိသူတွေ တက်ရောက်ကြပါတယ်။
Previous articleစစ်ပွဲကိုဖန်တီးနေသူတွေ ပြည်သူ့မျက်နှာ၊ တိုင်းပြည်မျက်နှာ ကြည့်ကြဖို့ သူရဦးရွှေမန်း သတိပေး
Next articleနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းဖို့ ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် ပြော